Wasiir Dhuxulow & Waxqabadka xukuumadda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Dhuxulow & Waxqabadka xukuumadda Soomaaliya
Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuxulow ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Horumarka Waxbarashada, Horumarka Federaalka, Horumarka Xiriirka Carabta iyo Soomaaliya, Horumarka Warbaahinta Dalka, Wadatashiga Joojinta Gudniinka Fircooniga ah, Arrimaha Gar-gaarka Bani’aadanimo, Horyaalka Cayaaraha fudud oo la soo gabogabeeyey iyo Xukunno dil ah oo lagu fuliyey Dambiilayaal.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Waxbarashada ayaa yiri “Dowladda Federaalka Soomaaliya waxey ku guuleysatay in 1dii December la furo Iskuul ay ardeyda waxbarasho lacag la’aan ah ku dhiganayaan. Iskuulkan oo la magacbaxay 11ka Janaayo kana kooban 10 fasal ayaa waxaa xariga ka jaray Wasiirka Waxbarashada, iyadoo ay Midowga Yurub maalgeliyeen dhismaha Iskuulkan. Iskuulkan oo dhawaan dib u dayactir ay ku sameeyeen Midowga Yurub ayaa loogu talagalay in wax lagu baro carruurta ku nool degmada C/casiis iyo deegaannada kale ee ku xeeran. Eregyga Gaarka ah ee Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Danjire Michele Cervone d’Urso iyo Wasiirka Waxbarashada Mudane Ciise Maxamed Axmed Guraase oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay muhiimada waxbarashada sheegeyna in horumarka dalka ka jira ay suurto gelisay in Iskuuladii dowladda dib loo howlgeliyo.”
Wasiirka Warfaafinta ayaa hadalkiisa ku bilaabay horumarka Federaalka ayaa yiri “Dowladda Federaalka ayaa ku tilmaantay caleema saarka Madaxweynaha Koofur Galbeed oo Baydhabo lagu qabtay 3dii December 2014 tallaabo horey loogu qaaday barnaamijka dhaqangelinta Federaalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa ka qeybgalay Xafladda caleema-saarka Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Sharif Hassan Sheikh Aden. Sidoo kale waxaa ka qeybgalay xafladda xubno ka socda Maamulada Puntland, Jubba, Galmudug, iyo xubno ka socday QM, IGAD, Ethiopia, Turkey, Sweden iyo waddamo kale. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan Koonfur Galbeed inay ilaaliyaan midnimada, isla markaana ay la shaqeeyaan hogaanka cusub. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Koonfur Galbeed in uu xoojiyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya meelo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed, si Al-Shabaab looga cirib tiro guud ahaan dalka. Beesha caalamka, Dowladda Federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey tallaabadan horumarka leh oo laf-dhabar u ah dhaqangelinta nidaamka Federaalka Soomaaliya.”
Horumarka Xiriirka Carabta iyo Soomaaliya
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Xiriirka Soomaaliya iyo Jaamicadda Carabta ayaa yiri “Madaxda Qaranka ayaa 4tii December 2014 waxey Muqdisho kula kulmeen wafdi heer sare ah oo ka socday Jaamacadda Carabta oo uu hogaaminayey R/wasaare Ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kuwait, Sheekh Sabaax Khaalid Xaamid Al Sabaax oo booqasho taariikhi ah ku yimid Soomaaliya. Kulanka markii uu soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Kuwait Sheekh Sabaax Khaalid Xaamid Al Sabaax. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in kulankooda uu qeyb ka ahaa sii xoojinta xiriirka Carabta iyo Somalia, wada shaqeynta Soomaaliya iyo dowladaha carabta, iyadoo sanadka cusubna la qaban doono shir jaamacadda Carabta ay u qabaneyso Soomaaliya oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ku saabsan horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya. R/wasaare Ku Xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Kuwait ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihay inay Muqdisho soo booqdaan ayna diyaar u yihiin caawimaada dadka iyo dalka. Wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Dibada Mauritania Ahmad Ould Tegeude iyo Xoghayaha Guud ee Jaamacada Carabta Nabil Al-Carabi.“
Horumarka Warbaahinta Dalka
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka warbaahinta dalka ayaa yiri “Wasaaradda Warfaafinta oo in muddo ahba waday horumarinta warbaahinta ayaa waxey ku guuleysatay in idaacada Raadiyo Muqdisho la gaarsiiyo 7 magaalo oo ka baxsan Muqdisho, kuwaas oo kala ah Beledweyne, Baydhabo, Gaalkacyo, Guriceel, Garoowe, Boosaaso, iyo Dhuusamareeb, tanoo aheyd qorshaha wasaaradda si shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiiyo idaacada qaranka. Buulo Burte iyo Baraawe ayaa iyagana dhowaan la gaarsiin doonaa Idaacada Radiyo Muqdisho. 30kii November 2014 ayaa Dadweynaha ku nool Baydhabo waxey soo dhaweeyeen dhageysiga Idaacadda Radio Muqdisho oo la gaarsiiyay magaaladaasi, iyadoo hadda si toos ah looga dhageeysto magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda. Idaacadda Radio Muqdisho ayaa noqotay tan loogu dhageysiga badanyhay magaalada Baydhabo. Bulshada reer Baydhabo ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsanyihiin wararka, barnaamijyada, iyo suugaanta kala duwan ee ka baxa Radiyo Muqdisho.”
Wadatashiga Joojinta Gudniinka Fircooniga ah
Wasiirka Warfaafinta ayaa ka hadlay Wadatashiga Joojinta Gudniinka Fircooniga ah ayaa yiri “1dii December 2014 Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka waxey Muqdisho ku qabatay kulan looga arinsanayay siyaasadda ku aadan wax ka qabashada dhibaatada Gudniinka Firnoociga uu u leeyahay dumarka Soomaaliyeed. Ka soo qeybgalayaasha kulanka oo gaarayey 100 ka kala timid qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa afkaartooda ka dhiibtay iyagoo isku raacay in Gudniinka Fircooniga ah uu dhib weyn ku hayo dumarka. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay qorshaha wasaaradda ee wax ka qabashada Gudniinka Fircooniga, iyadoo sheegtay in heerka gudniinka fircooniga ee Soomaaliya lagu qiyaasay 98%. Ujeedada wadatashiga ayaa aheyd sidii loo soo saari doono sharci xakameya Gudniinka Fircooniga ah kaasi oo dhibaato ku ah Dumarka Soomaaliyeed. Wasiiradda ayaa Agaasimaha Ololaha Ciribtirka Gudniinka Fircooniga u magacowday Drs. Mina Xasan Maxamed oo horay u aheyd xiriiriyaha wasaaradda haweenka.“
Arrimaha Gar-gaarka Bani’aadanimo
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Arrimaha Gargaarka Bani’aadanimo ayaa yiri “Dowladda Federaalka waxey soo dhoweyneysaa doorka Qurbojoogta Soomaaliyeed oo 1dii December ay Jaaliyada Soomaaliyeed ee Norway ay Hay’adda Rahma Islamic Relief ay u soo dhiibeen raashin ay ugu talogaleen qoysaska ku dhibaateysan deegaanno hoos yimaado Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Deegaannada deeqda la gaarsiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa Guryo Cadde, Tawakal, Biyo Quran, iyo degaanno kale. Dadka deegaanka ayaa waxey ka soo qaxeen fatahaada webiga Shabelle. Dhamaan dadkii ka faa’ideystay deeqda gar-gaarka ah ayaa ka mahadceliyay, iyagoona sheegay In ay tahay markii ugu horeysay oo deeq noocaan ah la soo gaarsiiyo. Dowladda Federaalka waxey ugu baaqeysaa qurbojoogta iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay caawinaan wallaalahooda ku tabaaleysan dalka gudihiisa, si aan u gaarno heer isku filnaasho ah.”
Horyaalka Cayaaraha Fudud oo la soo gabogabeeyey
Wasiirka Warfaafinta ayaa ka hadlay Horyaalka Cayaaraha Fudud oo Muqdisho lagu soo gabogabeeyey ayaa yiri “Dowladda Federaalka oo in muddo ahba dhiirigelineysa horumarinta cayaaraha ayaa 4tii December 2014 waxaa lagu soo gabogabeeyey Garoonka Banaadir Horyaalka 30-aad ee ciyaaraha fudud ee dalka. Xoghayaha Guud ee Xiriirka Ciyaaraha Fudud Maxamed Cabdullaahi Dhaaleey ayaa ka warbixiyey qaabka uu tartanka u socday una soo gabogaboobay. Ku-Simaha Guddoomiyaha XSCF Marwo Khadiijo Aadan Daahir ayaa si gaar ah ugu mahad celisay kooxaha iyo ciyaartoyda tartanka ka qaybgashay oo soo bandhigay ciyaar asluub ku salaysan. Madaxda Olembikada Soomaaliya iyo Xiriirada ayaa sheegay in cayaartoyda guuleysatay ay heli doonaan fursad ay ku matali karaan ciyaraha Olombikada Adunka ee 2016-ka dhici doonaa dalka Brazil. Wasaaradda Cayaaraha iyo Dhalinyarada ayaa soo xirtay horyaalka kuna tilmaantay tallaabo horey loo qaaday. Horyaalki 30-aad ee ciyaaraha fududu oo ay ka qaybggalayeen 8 koox ayaa koobab iyo bilado la gudoonsiiyay kooxihi iyo ciyaartoydii kaalmaha hore ka galay tartanka. Naadiga Heegan ayaa uruursaday dhibcihi ugu badnaa xaga qiimaynta kooxaha waxaana lagu abaal mariyay koobka kaalinta koowaad, Kooxda Iimaan Hospital oo kaalinta labaad gashay ayaa koob la gudoonsiiyay. Dhanka Gabdhaha koobka kaalinta 1-aad waxaa ku guulaysatay kooxda Iimaan, labaadna waxaa gashay Olympic Fitness Centre. Sidoo kale waxaa abaal marino la guddoonsiiyay SNTV iyo Radio Goobjoog oo ka qayb qaatay tabinta inta uu tartanka socday.”
Xukunno Dil ah oo lagu fuliyey Dambiilayaal
Wasiirka Warfaafinta oo ugu danbeyntii ka hadlayey xukunno dil ah oo lagu fuliyey dambiilayaal ayaa yiri “ Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida ayaa waxaa ay 4tii December 2014 Dil Toogasho ah ku Fulisay sedex Gacan ku dhiigle oo horay Dilal ugu geystay Mawaadiniin Soomaaliyeed, islamarkaana Maxkamada Ciidanku ay Horay Xukunka ugu riday Markii lagu helay dambigaas. Sedexdaan Ruux Ee la toogtay mid ka mid ah waxuu ka tirsanaa Al-Shbaaab halka labada kalena ay ahaayeen rag ka tirsanaa Ciidanka Qalabka Sida. Dadka la toogtay ayaa kala ahaa Ibraahim C/laahi Cali oo horay u dilay Wiil Filim qaade ahaa oo lagu Magacabi jiray Sakariye Maxamed Maxamuud Macalin oo uu ku dilay Degmada Shibis Ee Gobolka Banaadir, sidoo kale waxaa uu dilay Ex Dable Cali Mambuuq. Shaqsiga labaad ee la toogtay ayaa ahaa C/laahi Cartan Maxamuud oo 22 jir ah isagoo Axmed Cabdiraxmaan Shariif ku dilay Degmada Shibis. Qofka seddexaad ayaa ahaa Ex Dable C/fitaax Axmed Cabdi oo 29 jir ah isagoo dilay Maxamuud Xasan Maxamed. Aabaha Sakariye Maxamed Maxamuud Macalin oo goob joog ahaa Goobta lagu toogtay Gacan ku dhiiglihii dilay Wiilkiisa ayaa soo dhaweeyay Xukunka Maxkamadu fulisay isagoo sheegay in ay muuqato cadaalad iyo garsoor Bulshadu ay isku haleyn karto Waxaana uu ku taliyay in sidaan oo kale Cadaalada loo mariyo cid kasta oo Disha Mawaadin aan Dambi lahayn. Fulinta dilalkan goobta fagaaraha ah ayaa ujeedadoodu tahay sidii loo yareyn lahaa ama loo joojin lahaa dilalka loo geysto dadka aan waxba galabsan, iyo in shacabka ay arkaan cadaalad hirgashay.”
The Myth of Non-Tax Paying Somalis in the US
Ban Ki-moon oo ku xigeen cusub u magacaabay Nickolas Kay